गर्भवती भएपछि ‘भद्रगोल’ छोडेकी रक्षा पहिलो पटक श्रीमानको साथ मिडियामा, कहिले जन्माउँदेछिन् बच्चा ? ब्यक्तिगत जीवनका यि सारा पाटा खोलीन् ? हेर्नुहोस् भिडियो – Gazabkonews
गर्भवती भएपछि ‘भद्रगोल’ छोडेकी रक्षा पहिलो पटक श्रीमानको साथ मिडियामा, कहिले जन्माउँदेछिन् बच्चा ? ब्यक्तिगत जीवनका यि सारा पाटा खोलीन् ? हेर्नुहोस् भिडियो
in Uncategorized, मनोरञ्जन
हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘भद्रागोल’बाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठ अहिले भद्रगोलमा देखिएकी छैनन् । उनी गर्भवती भएपछि भद्रगोलको काम छोडेकी हुन् । भद्रगोल छोडेपछि मिडियावाट हराएकी रक्षा अहिले भने आफ्ना श्रीमानका साथमा देखिएकी छन् ।
उनको श्रीमान विजनेश गर्छन । टेलिसिरियल लगायतका कामवाट केही समयका लागि विदा लिएपछि उनी अहिले श्रीमान्को काममा सघाउन थालेकी छन् । रक्षाका श्रीमान् र उनका साथीहरुले मिलेर हालै नयाँ पार्टी प्यालेस संचालन गरेका छन् । रक्षा श्रीमान्को स्मार्ट पार्टी प्यालेसमा फेला परेकी छन् । रक्षाका श्रीमान् कम मात्र मिडियामा सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले उनका श्रीमान् का बारेमा पनि कमलाई मात्र थाहा छ । रक्षाले पहिलो पटक श्रीमान्का बारेमा धेरै कुरा पनि खुलाएकी छन् ।
एक सयको हाराहारीमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी रक्षाले ६५ भन्दा बढी विज्ञापनमा अभिनय गरेकी छिन् । राम्रो स्त्रिmप्ट पाए मात्रै फिचर फिल्ममा काम गर्ने उनी बताउँछिन् । बाहिर धेरै काम गर्ने रक्षा अहिले घरमा मात्र बस्नुपर्दा अलि समस्या भएको बताएकी छन् । गर्भवती अवस्थामा उनलाई निकै कठिन भएको पनि बताएकी छन् । करिब ४ महिना आफुलाई निकै समस्या भएको बताइन् ।